Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar oo si rasmi ah xilka Imaamnimo ee beesha Mudulood ula wareegay – Damqo
Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar oo si rasmi ah xilka Imaamnimo ee beesha Mudulood ula wareegay
Waxaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah duubka Imaamnimo ee beesha Mudulood loogu Caleema saaray Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar.
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayna kasoo qeyb galeen Siyaasiyiin, madaxweynihii hore ee soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, Saraakiil ciidan Senetor Muuse Suudi Yalaxoow, Odayaasha dhaqanka, Aqoonyahanada, Dhalinyarada, Haweenka iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee beesha Mudulood ayaa lagu caleemo saaray Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar.
Sidoo kale munaasabadda Imaamka maanta lagu duubay waxaa goob joog ka ahaa khudbad aad u qiimo badana ka jeediyay Axmed Imaam Cumar oo adeer u ah Imaam Daahir Imaam Maxamuud oo xilkaas si rasmi ah ula wareegay.
Munaasabadda Calaama saarka ayaa waxaa khubado guubaabo iyo dar daaran ah ka jeediyay dhamaan duubabka beelaha ay ka koobantahay beel weeynta Mudulood Senetor Muuse Suudi Yalaxoow iyo Madaxweyne Cali Mahdi.
Waxyaabaha ugu horeeya ee laga filayo inuu Imaamka wax ka qabto ayaa lagu sheegay inay tahay dhex dhexaadinta beelaha walaalaha ah ee colaadooda kusoo laa laabatay degmada Cadale iyo deegaanada kale ee hoosyimaada.
Munaasabadda oo si qurux badan ku bilaabatay isla markaana qaadatay saacado badan ayaa kusoo dhamaatay sidii loo qorsheeyay waxaana Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar uu la wareegay xilka imaamnimo ee Beesha Mudulood waxaana uu goobta ka jeediyay khudbadii xiritaanka oo uu beesha ugu duceeyay.
Previous Fariin ku socoto beel weynta Muudulood ee dalka iyo dibada joogto
Next Wareysiga Xaaji Abuukar Cumar Caddaan oo horudhaciisa la sii daayay Sabtidii ayuu ku sheegay inuu taageersan yahay dagaalka Al Shabaab,